Ny fizahantany mpizahatany tsara indrindra any Espana araka ny TripAdvisor | Vaovao momba ny dia
Ny toerana fizahan-tany tsara indrindra any Espana araka ny voalazan'ny TripAdvisor
Susana Garcia | | Tanànan'ny Espana, General
Manamboatra filaharana mahaliana hatrany i TripAdvisor amin'ny fiheverana ny hevitr'ireo mpampiasa azy, izay mandeha matetika. Izany no antony mahatonga ireo fifantenana ireo ho fomba tsara hanome aingam-panahy antsika rehefa mitady ny toerana manaraka ho an'ny fialantsasatra misy antsika isika. Amin'ity tranga ity dia ho hitantsika ireo tranonkala tsara indrindra amin'ny mpizaha tany any Espana, fa tsy vitsy ny.
Ireto toerana mahaliana ny mpizahatany ireto dia fantatra, ary tsy isalasalana fa mpitsangatsangana tokoa, ary ny toerana any Andalusia sy Catalonia no ahitanay ny ankamaroany, na dia misy aza ireo izay avy amin'ny vondrom-piarahamonina hafa ihany koa. Fantatray fa mbola manana ny ao an-tsainao ny hafa, na dia izany aza Hevitra TripAdvisor ary azon'izy ireo atao tsara ny manompo anay hisafidy toerana voalohany hitsidihana.
1 Moske-Katedraly ao Córdoba
2 Plaza de España any Seville
3 Ny Alhambra an'ny Granada
4 Ny fianakaviana masina any Barcelona
5 Ny Royal Alcazar an'ny Seville
6 Casa Batlló any Barcelona
7 Lapan'ny mpanjaka any Madrid
8 Magic Fountain any Barcelona
9 Katedraly Sevilla
10 Katedraly La Seu de Mallorca
Moske-Katedraly ao Córdoba
La Moske-Katedraly ao Córdoba Io no iray amin'ireo tsangambato be mpitsidika indrindra eto amintsika, ary tsy mahagaga izany amin'ny hakanton'ity fananganana ity. Ny fiandohany amin'ny maha moske azy dia nanomboka tamin'ny taona 785, izay no mosque lehibe fahatelo manerantany, aorian'ny Mekka sy Istanbul. Tandindon'ny zavakanto Umayyad Espaniola-Silamo. Raha misy zavatra tsy tokony tsy azontsika ao, dia ny efitrano hypostyle, ilay efa hitantsika rehetra tamin'ny sary miaraka amin'ireo tsanganana sy ny tohany. Ny Patio de los Naranjos, ny facade ary ny trano fiangonana anatiny dia toerana hafa azontsika aleha amin'ny fitsidihantsika.
Plaza de España any Seville
Raha misy toerana iray izay tian'ny olona rehetra ao an-tanànan'i Seville, dia ny Plaza de España, eo amoron'ny Valan-javaboary Maria Luisa. Toerana tena tsara tarehy izay misy koa lapa, tilikambo ary loharano taloha. Ny fotoana tsara indrindra hankafizana azy dia amin'ny maraina, satria misokatra ny tolakandro ny tolakandro ary toerana misy olona sy mpizahatany maro kokoa.
Ny Alhambra an'ny Granada
Iray amin'ireo tsangambato manan-tantara izay mandeha manerantany miaraka amin'ny lazan'izy ireo dia tsy ho diso amin'ity safidy ity. Miresaka momba ny Alhambra any Granada izahay. Tokony hanokana tolakandro iray manontolo amin'ity toerana ity isika, ary handray fidirana aloha, satria matetika dia misy andalana lava. Ao amin'ny Alhambra dia hifaly amin'ny zavakanto Andalosiana sy toerana toa ny Patio de los Leones, ny Patio de los Arrayanes na ny Efitra rahavavy roa, miaraka amin'ilay vaveta vita sokitra mahavariana.
Ny fianakaviana masina any Barcelona
Ao afovoan'i Barcelona dia te-hitsidika ny rehetra Tempoly Expiatory an'ny fianakaviana masina, iray amin'ny sangan'asan'i Gaudí. Tsy hitan'ny mpanakanto ny nahavitany ny asany, izay nitohy noforonina teo ambany fiahian'ny mpanampy azy ary avy eo dia arisiva isan-karazany. Hatramin'izao dia mbola tsy hitantsika ny tempoly vita, saingy tsy manakana ny mpizahatany an-jatony tsy ho tonga hijery io trano ara-pivavahana tany am-boalohany io, tsy manam-paharoa eto amin'izao tontolo izao.
Ny Royal Alcazar an'ny Seville
Ao Seville dia mahita toerana mahaliana iray hafa isika. Izahay dia miresaka ny Real Alcázar, lapa mimanda miorina ao amin'ny tanàna taloha izay natsangana tamin'ny dingana samihafa nandritra ny tantara, noho izany ny fifangaroan'ny fomba ao amin'ireo efitrano samihafa. Hitanay ny Fomban'ny Mudejar sy Gothic, fa koa maro hafa. Ny zaridaina dia tsara tarehy indrindra, ary tsy isalasalana fa iray hafa amin'ireo zavatra izay tsy azontsika hadino amin'ity faritry ny palatialy ity.
Casa Batlló any Barcelona
Ao amin'ny Casa Batlló dia afaka mahita iray amin'ireo lehibe hafa isika asan'i Gaudí tompony. Ato amin'ity trano ity dia azonao atao ny mahita ny fomba voajanahary an'ny mpanakanto, izay nahazo aingam-panahy avy amin'ireo endrika natiora hamoronana asa mahatalanjona toy izany. Samy maneho ny lakilen'ilay mpanao mari-trano na ny endrika na ny atin'ny trano, miaraka amin'izany fombany sary an-tsaina izany, izay mampiavaka ny asany tokoa.
Lapan'ny mpanjaka any Madrid
Ny Royal Palace no fonenana ofisialin'ny Mpanjaka, na dia mipetraka ao amin'ny Palacio de la Zarzuela aza izy ireo. Ny Royal Palace dia trano tsara tarehy mifangaro amin'ny faritra toradroa, izay misy koa ny Campo Moro sy Sabatini Gardens tsara tarehy. Azo atao ny mitsidika ny lapan'ny mpanjaka ao anatiny hankafy ny efitrano fandraisam-bahiny na sary hoso-doko, lamba fisaka sy fanaka fahagola. Ny fahitana ny fanovana ny mpiambina avy any ivelany dia malaza ihany koa.
Magic Fountain any Barcelona
Ny Magic Fountain of Montjuïc any Barcelona dia iray amin'ireo manintona mpizahatany izay nahaliana ny mpitsidika ny tanànan'i Catalan. Loharano iray lehibe mitazona azy ireo mampiseho rano sy hazavana amin'ny fotoana sasany, izay tsy maintsy anontaniana mialoha mba hankafizanao ity seho ity amin'ny rano sy jiro.
Ny Katedraly Santa María de la Sede ao Seville dia fantatra amin'ny maha katedraly Christian Gothic lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, ary noho ny fananany ao amin'ny tilikambony izay minaretan'ny mosque taloha. Ny Giralda dia natsangana avy amin'ny fanahin'ny minaretan'ny moskea Koutoubia avy any Marrakech.
Katedraly La Seu de Mallorca
Niafara tamin'ny katedraly iray hafa mahaliana antsika ihany koa, ary izany no izy Katedraly La Seu de Mallorca Izy io dia manana ny endriny Gothic Levantine ary izy no trano fivavahana lehibe indrindra eto amin'ny nosy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ny toerana fizahan-tany tsara indrindra any Espana araka ny voalazan'ny TripAdvisor
The Villa de Ararapira, tanànan'ny matoatoa ao Brezila